Ban Ki-moon oo laga yaabo inuu madaxweyne-nimada dalkiisa u tartamo - BBC News Somali
Ban Ki-moon oo laga yaabo inuu madaxweyne-nimada dalkiisa u tartamo
Lahaanshaha sawirka AFP PHOTO /UNITED NATIONS/ ESKINDER DEBEBE
Image caption Ban Ki-moon wuxuu bidhaamiyey in laga yaabo inuu madaxweyne-nimo u tartamo
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa bidhaamiyey inuu dhawaan u tartami doono madaxweynenimada waddankiisa Kuuriyada koofureed.
Shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey ayuu ku sheegay in waxoogaa nashasho ah ka dib uu ku laaban doono Kuuriyada koofureed, uuna ka baaraan degi doono sida ugu wanaagsan ee uu dalkiisa wax ugu tari karo.
Image caption Baarlamaanka ayaa u codeeyey in Park Geun-hye dacwad lagu soo oogo
Ms Park ayaa lagu eedeeyey inay u ogolaatay saaxib aad ugu dhow inay ka macaashto xiriirkeeda.
Haddii maxkamadda dastuuriga ah ee dalka ay meel mariso cod bixintii todobaadkii hore lagu go'aamiyey in dacwad lagu soo oogo, Ms Park waxay noqon doontaa madaxweynihii ugu horreeyey ee waddankaas ee isagoo xilka haya si dimoqaraadiyad ah loo eryo, waxaana doorashooyin madaxweynenimo la qabanayaa 60 maalmood gudahood.
Image caption Banaanbaxyo looga soo hor jeedo madaxweyne Park Geun-hye ayaa socday todobaadyadii la soo dhaafay